Abesifazane abaningi abafuna ukwehlisa isisindo somzimba, bakholelwa ukuthi lokhu kuyozisiza umzimba nokudla okuthile. Nokho, ephelele umphelelisi lezi zimali kubhekwa amanzi ukusetshenziswa isisindo ukulahleka.
Kusukela esikoleni siyazi ukuthi umuntu 80% ketshezi. Nokho, ngesikhathi ukuphila reserves yayo emzimbeni njalo mpilo, futhi ngenxa yalokho kufanele wanezela njalo. Ukusetshenziswa a kwamahala kwenani elithile lamanzi ikhuthaza kwesisindo.
Kukhona izindlela eziningana indlela ukunciphisa umzimba ngokuphepha emanzini. With kwamacala abukhali isisindo isikhumba kuba imisipha saggy futhi flabby. Ngenxa lemali elikhulu ketshezi kwimenyu nsuku zonke, ungayeka le nqubo. sibalo Smartness kuncike umsebenzi cell yokuvuselela, naphezu kokuthola umzimba amanzi anele uyalulama ukulinganisela ezithile zomzimba.
On umbuzo ukuthi kungenzeka ukunciphisa umzimba uma uphuza amanzi amaningi, izazi zokudla uphendula ngoyebo nale mihlahlandlela elandelayo. Ngakho, kudingeka siqonde ngokucacile ukuthi kubalulekile ukuba baphuze amanzi ihora elilodwa ngaphambi kokudla nangemuva. Lokhu isiphuzo kusiza ukuba alulaze le juice esiswini, indlala ngokulinganisela futhi kuvimbele ukudla.
Lapho usebenzisa indlela "Indlela ukunciphisa umzimba ngokusebenzisa amanzi?" Kumele lokushisa mayelana 22C. Kuphela kuleli cala, umzimba ziyophoqeleka ukuba bachithe amandla okwengeziwe Ukushisa yayo kanye le nqubo wokuqeda umzimba isisindo okweqile. Nokho, ibanda kakhulu amanzi okuphuza futhi akunakwenzeka, ngoba kubambezela ukusetshenziswa umzimba, ukuthi kwenza abantu bakuphathe amafutha.
ngempumelelo uma kwenzeka kancane umuzwa isiphuzo elambile ingilazi yamanzi kakhulu. Uma emva isigamu sehora isifiso ukuzama ehluleka, kubalulekile namanje udle.
Indlela ukunciphisa umzimba ngamanzi, owesifazane ngamunye unquma bona ngamunye. Ngakho, ochwepheshe batusa ukuba aphuze isilinganiso esiphansi amanzi ngelanga (kufika ku 2 izinkomishi) bese wengeza obunye ingilazi yamanzi ngoba zonke extra 10 kg. Kuvele okufana okahle amanzi entwasahlobo, kodwa ingasetshenziswa futhi amanzi avamile elicwengekileyo.
Ukuphuza idinga usuku lonke. Kulokhu, kufanele uqale ekuseni inkomishi efudumele amanzi ulamula, okuyinto bazogcwalisa amaseli umswakama ezidingekayo futhi ziyovuswa ebuthongweni zonke zomzimba.
Futhi, ngaphambi kokudla akufanele ukhohlwe ukuphuza ingilazi yamanzi futhi uqiniseke - ngaphambi kokulala.
Impela kubhekwa melt- Ukudla amanzi. Nokho, kudingeka alungiselele kahle ke.
Kunconywa ukusebenzisa amanzi elicwengekileyo kuphela. isiqukathi Imigodi egcwele amanzi embozwe ngesivalo bese efakwa efrijini. Kwathi lapho kuqala ukuba embozwe iqhwa, kumele kukhishwe kulahlwe. Futhi kuphela emva ukuthi udinga ukumisa unomphela lonke emanzini. Ngemva incibilikiswa ke ekamelweni lokushisa etholwe ekahle meltwater neminye njengoba nosawoti wamaminerali nhlobo, futhi ngenxa yalokho ngempumelelo kunomthelela isisindo ukunciphisa. futhi uye ephulukisa izakhiwo, it rejuvenates umzimba ukushaja ubungqabavu yayo futhi amandla.
Inzwa eyinhloko yenkinga "Indlela ukunciphisa umzimba ngamanzi?" Ingabe usheshisa umzimba uma kusetshenziselwa ncamashi ancibilike amanzi. Futhi waphawula ukuqedwa lelitfutfukile ubuthi ukungcola ukuthi buthelela emzimbeni. Meltwater kuthuthukisa ikhono engqondweni, ukunakwa komuntu.
Ngokwe-inqubo "Indlela ukunciphisa umzimba ngamanzi?" Ukuze kufezeke oyifunayo isisindo ukusetshenziswa kwamanzi ncibilika kuyadingeka ukuze ulethe izinkomishi ezintathu ngosuku. Isimo eyinhloko elandelayo: ingilazi yamanzi esiswini esingenalutho. Ngaphezu kwalokho, izinga lokushisa yayo kufanele ibe mayelana eziyishumi degrees.
Abantu ezikhathini zasendulo babeba esetshenziswa kuphela ancibilike amanzi kusukela entabeni iziphethu nabadumile ukuze ipilo ehle kanye nokusebenzisa ingqondo.